Ama-FAQs - uShijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co, Ltd.
Amanani ethu angashintsha ngokuhambisana nokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Sizokuthumelela uhlu lwamanani entengo olusha ngemuva kwenkampani yakho xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ingabe unayo ubuncane be-oda?
Yebo, sidinga ukuthi yonke imiyalo yaphesheya ibe nobuncane be-oda obuqhubekayo. Uma ufuna ukuthengisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uhlole iwebhusayithi yethu
Ungakwazi ukuletha imibhalo efanele?
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kufaka phakathi Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuguqulwa; Umshuwalense; Umsuka, kanye neminye imibhalo yokuthumela lapho kudingeka khona.
Yisiphi isikhathi sokuhola esiphakathi?
Kumasampula, isikhathi sokuhola siseduze kwezinsuku eziyi-7. Ngomkhiqizo omningi, isikhathi sokuhola yizinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola imali yediphozithi. Izikhathi eziholayo ziqala ukusebenza lapho (1) sithole idiphozithi yakho, futhi (2) sivuma imvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu eziholayo zingasebenzi ngomnqamulajuqu wakho, sicela uye phezu kwezidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Ungenza inkokhelo ku-akhawunti yethu yasebhange, iWestern Union noma i-PayPal:
I-30% yediphozithi ngaphambi kwesikhathi, ibhalansi engu-70% uma kuqhathaniswa nekhophi le-B / L.
Ithini iwaranti yomkhiqizo?
Siqinisekisa izinto zethu zokwakha kanye nokwenza umsebenzi. Ukuzinikela kwethu ekwanelisekeni kwakho ngemikhiqizo yethu. Ewaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izindaba zamakhasimende ukuze kwanelise wonke umuntu
Ingabe uyaqinisekisa ukulethwa okuphephile nokuphephile kwemikhiqizo?
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okhethekile wempahla eyingozi nabathuthi abaqinisekisiwe besitoreji sokubandayo sezinto ezibucayi zokushisa. Ukupakelwa kochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingezona ezejwayelekile zingase zithole imali eyengeziwe.
Izindleko zokuthumela zincike ekutheni ukhetha kanjani ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kakhulu kepha futhi ebiza kakhulu. Ngokuthunga kwasolwandle ikhambi elingcono kakhulu lamanani amakhulu. Amanani akhona athwala umthwalo esingakunika wona kuphela uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.